Dawladda Dalka Ruushka oo Soomaaliya u Rajeysay in ay Guul ka Gaarto La Dagaalanka Argagixisada.
Ciidamada TPLF oo Sida Lagu Soo Waramayo Lagala Wareegay Magaalooyin Muhiim u ahaa dibna loo Riixey.
Amiir Tamiim Binu Xamadka Dalka Qatar oo Kulan La Yeeshay M/weynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo.
Labo Ciyaartooy oo ku Guuleystey Kubadda Dahabka ah ee Loogu Yeero Ballon d’Or akhriso kuwa ay yihiin.
Xogtii SOM OIL oo lala soo wareegey iyo wasaarada badroolka wasaarad ahaan loo magacaabey.
Waxaa Muqdisho lagu qabtay maanta munaasabad xarigga looga jawarayay dhismaha cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Somalia, taasoo ku taalla bartamaha magaalada Muqdisho, iyadoo wasaaraddu kula soo wareegtay xog-ururin oo la xiriirta baarista shidaal oo ay horay u sameysay shirkada Soma Oil & Gas. Xaruntan cusub ee wasaarada batoolka ayaa...
Xoojinta wax qabadka hey’adaha iyo hufnaanta maaliyada soomaaliya oomaanta shir ku saabasni Muqdisho ka furmey.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho ka furay kulan laba maalmood socon doona oo ku saabsan xoojinta waxqabadka hay’adaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. Xasan Sheekh oo hadal ka jeediyay shirka ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo muhiimadda ay leedahay in si hufan loo dhiso hay’adaha, isla xisaabtanna...
Nin lagu soo eedeeyey in uu galey zino oo dhaq dhaqaaqa AL-shabaab xukun ku fuliyeen.
Maxkamad hoost-tagta Xarakada Al-shabaab oo ku taalla dulleedka Degmada Buurhakaba ee Gobolka Bay ayaa maanta xukun karbaash ah ku fulisay nin ay sheegeen in lagu soo eedeeyay inuu kufsaday gabar dhallinyaro ah. Ninka xukunka lagu fuliyay oo lagu magaacabaa, Xasan Macallin Madeey ayaa la sheegay inuu kufsaday gabar dhallinyaro ah oo magaceeda...
Ciidamada milateriga kenya oo taba barkooda ay heshiis ku galeen ingiriiska iyo kenya.
Dowladaha Kenya iyo Biritain ayaa kala Saxiixday maanta heshiis ay Britain ku Tababbarayso millateriga Kenya, iyadoo heshiiskan cusub uu soconayo muddo shan sannadood ah. Qaar ka mid ah saraakiisha Kenya ayaa sheegay in si taxaddar leh ay u soo dhaweynayaan heshiiskan ay la galeen dowladda UK ee lagu xoojinayo tababarrada la...
Hay’ada Nabad-sugida Qaranka Somalia ayaa lagu soo wareejiyay maanta dagaal-yahankii Mareykanka ahaa ee dhawaan Al-shabaab kasoo baxsaday, iyadoo arrintan uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Somalia, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini. Dagaalayahankan oo Mareykan Madow ah ayaa lagu magacaabaa, Abdimalik Jones isagoo isku dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Baraawe...
Dawlad goboleedka Jubbaland oo ugu baaqdey Puntland in ay aqoonsato M/G deriska la ah eeG/mudug.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland, Sh. Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in maamulka Puntland looga baahan yahay inay aqoonsadaan maamulka Galmudug, isagoo sidoo kale maamulka Galmudug ay iyaguna ix-tiraamto Puntland maadaama uu yahay maamul iyaga ka horreeyay dhanka dhismaha. Sheekh Axmed Madoobe ayaa hadalka ka jeediyay kaddib heshiiskii colaadihii nabadeed ee...